မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မှန်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ကို ဆန့်ကျင်ပြပါလို့ တိုက်တွန်းနေသူများသို့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Calling for Demonstrations for the massacred Muslims
Rohingyas claimed: death 3000, injured 3000 and displaced over 200,000 »
မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မှန်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ကို ဆန့်ကျင်ပြပါလို့ တိုက်တွန်းနေသူများသို့
I support my brother’s declearation:
မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မှန်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ကို ဆန့်ကျင်ပြပါလို့ တိုက်တွန်းနေသူများသို့-
“ပြည်မမွတ်စ်လင်မ် တွေကို “မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်” လို့ အသိအမှတ် ပြုရင်
အခု FB မှာ ၊ အွန်လိုင်းမှာ … အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဆဲဆို ဇာတိ ပြနေတဲ့ ခွေးရူး များကို နှိမ်နင်းပေးပါ။
ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီး နေတဲ့ အယုတ်စားအညံ့စားများကို ဆန့်ကျင် ပြပါ။“
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ရပ်ကွက် ထဲ ခွေးရူးသောင်းကျန်းရင် မွတ်စလင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယျာန် ဟိန္ဒူ အားလုံး က တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းဝိုင်း ရှင်းလိုက်တာ ဘဲဗျ။
Ultranationalism or မျက်ကန်းမျိုးချစ် (drkokogyi.wordpress.com)
This entry was posted on June 14, 2012 at 5:59 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မှန်ရင် ရိုဟင်ဂျာ ကို ဆန့်ကျင်ပြပါလို့ တိုက်တွန်းနေသူများသို့”
June 14, 2012 at 11:27 am | Reply
ဓားစာခံဖြစ်သွားတဲ့ ရခိုင်ပြည် ။။။။။
ဆွပေးတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ကြည့်ပါ။ ပြည်မကလူတွေပါပဲ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေ့ တဓူဝကိစ္စတွေနဲ့ ကောင်း ကျိုးဆိုးကျိုးကို ထိရောက် ခံစားမှုမ လိုတဲ့ မြို့ နေအလယ်အလတ်လူတန်းစား ဗမာ (သို့ ) မြန်မာတွေပါပဲ။ ရခိုင်ပြည်သွေးစွန်းတဲ့ သတင်းတွေအတွက် ဂျာနယ်စောင်ရေတိုးသလို ပေါ်ပျူလာ တွေလည်းဖြစ်ကုန်လေရဲ့ ။
အွန်လိုင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတဲ့ သာမန်ပြည်သူအများစုကတော့ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်ပြီး ချကြလေကွာ ဆိုပြီး အားမာန်တွေသွင်းပြီး တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နေကြလေရဲ့။ သူတို့ အတွက် ဆုံးရှုံးမှုကတော့ အင်တာနက် ဖိုးလောက်ပါပဲ။
သူတို့ ကြားချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို ရခိုင်ပြည်သူတွေက သွေးနဲ့ ရင်းပြီး ပေးနေကြရပြီ။ သူတို့ ပြောတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ကြပါဆိုတာကို ရခိုင်ပြည် သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ သိက္ခာနဲ့ ကာကွယ်ပေးနေရပြီ။ http://news.mmsy.info/news/​3454
February 6, 2013 at 2:51 pm | Reply
ကျွန်တော် website တော်တော်များများမှာမွတ်စ်လင်မ်တွေကိုပက်ပက်စက်စက်ပြောနေတာတွေက်ိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုအွန်လိုင်းပေါ်ကရန်တိုက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုနှိမ်နင်းပေးပါလို့ပြောချင်ပပါတယ်။